Ogaden News Agency (ONA) – Digniin – Qorshaha Cabdi iley iyo 2da Jenan
Digniin – Qorshaha Cabdi iley iyo 2da Jenan
Posted by ONA Admin	/ October 31, 2013
Noora Afgaab – Waxan uga digaynaa dhamaan shacabka Somaaliyeed ee Ogadenya inay ka feejignaadaan qorshaha ay wadaan cabdi iley iyo labada Jenan ee ka taliya Ogadenya. Warar aad loogu kalsoonyahay oon ka helnay meela kala duwan oo shaqaalaha kililka ka mid ah iyo dad nala jooga Adisababa ayaa sheegay inuu jiro qorshe la doonayo in dagaal qabiil oo lagu hoobto uu ka dhaco Ogadenya. Arintan ayay nimankaa dambiilayaasha sabab uga dhigeen inay tahay talaabada xigta ay tijaabinayaan ka dib markay ku hungoobeen qorshayaashii ay u dajiyeen inay shacabka kula dagaalamaan.
Qorshahan la dajiyay oo wajigiisii koowaad uu bilowday ayaa ah in dagaal laga dhex oogo Qabiilada kala ah ( ——), ilaa heybta ugu hooseysa. Arintan waxaa hadda bilaabay oo loo dhiibay qorshaheed qaybo ka mid ah ciidanka liyuu boliska oo maalin dhaweyd kubadii cagta ee gobolka Qoraxay iyo Dhagaxbuur ay isaga horyimaadeen ku budheeyay cayaartoydii Dhagaxbuur iyagoo iska dhigaya inay yihiin dad ka socda Qoraxay. Waxaa kaloo ay wadaan inay liyuu booliska u kala saaraan qabiil qabiil oo qola walba ay la soo safato reerahooda oo dhexdooda ay islaayaan iyagoo iska dhigaya inay difaacayaan reerkooda oo sidaa qabiil walba lagu dagaal galiyo.
Qorshahan cusub oo bilowday ayaan uga digaynaa dadweynaha, waxaanan ka codsanaynaa dhamaan dadka akhrista warqaddan inay gaadhsiiyaan odayaasha, wax-garadka iyo xataa liyuu booliska say uga digtoonaadaan in lagu fuliyo falalkaa guracan.
FG: Ma aanan qorin magacyada qabiil siduu noo soo gaadhsiiyay wariyaha anagoo ilaalinayna mabda’a uruka.